सभामुखलाई अर्को झट्का, सांसद रेखाकुमारीले दिईन यस्तो चेतावनी — Imandarmedia.com
सभामुखलाई अर्को झट्का, सांसद रेखाकुमारीले दिईन यस्तो चेतावनी
काठमाडौ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाको टाउको फुटाउन माइक प्रहार भएको छ। प्रतिनिधिसभामा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले रोस्ट्रमबाट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिरहँदा तल एमाले सांसद रेखाकुमारीले माइक उठाएर हानेकी हुन् ।
यसै गरि प्रतिनिधि सभा बैठकमै सभामुखलाई ताकेर माइकले हान्ने कोशिश गरेकी तर असफल भएकी एमाले सांसद रेखा झाले फेरी मौका पारेर सभामुख अग्नि सापकोटाको टाउँकोमा माइकले हान्ने बताएकी छन ।सभामुख अग्निप्रसास सापकोटाले पेलेर संसद बैठक अघि बढाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले आक्रोशित भएको छ।शुक्रबार बसेको संसद बैठकमा एमाले सांसदलेको अवरोधबीच विभिन्न अध्यादेश पेश गरिएको छ भने अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयक पनि पेश गरिसकेका छन्।
एमालेमा अर्थमन्त्री शर्माले रोस्ट्रमबाट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरिरहँदा एमालेका सांसदहरुले चर्को नारााबाजी गरेका थिए ।त्यतिबेला एमाले सांसदहरू आक्रोशित भए । मर्यादापालकसँग घम्साघम्सी चल्यो ।यही क्रममा एमाले सांसद रेखाकुमारीले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको टेबुलको माइक झिकेर रोस्ट्रमतर्फ हान्ने कोसिस गरिन् ।
त्यही क्रममा एमालेका अन्य सांसदले उनलाई रोके । माइक झिकेर हान्न खोजेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो टेबल अगाडि रहेको माइक झिकेर लुकाए । यसक्रममा संसदबाट बाहिरिएपछि रेखाकुमारीले सभामुखले अमर्यादित व्यवहार देखाएकाले आफूले माइक समातेर टाउको फुटाउन खोजेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् ।
यसै गरि, शुक्रबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले सांसदहरु सुरु देखिनै आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। सदन अवरोध गर्न खोजेपनि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले भने सदनका काम कारवाही अघि बढाइरहे। त्यही क्रममा एमाले सांसद रेखा झाले माइक झिकेर प्रहार गर्न खोजिन्।
निकै झोक्किएकि एमाले सांसद झाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको टाउको फुटाउने योजना भएको बताएकी छन् । शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ‘आज टाउको नै फुटाउँथेँ सभामुखलाई हान्न माइक तानेको । संसद्को मर्यादा छ नि । विरोध भइरहेको छ । हामी नारा लगाइरहेका छौँ बैठक चलाउने ?’ उनले भनिन् ।
उनले आज मौका नमिलेको तर मौका मिल्नेबित्तिकै हान्ने बताएकी छन् । उनले भनिन्, अहिले हानेको छैन मौका मिल्यो भने हान्छौँ ।’ संसद बैठकमा उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणका अघि रहेको माइक तानेकी थिइन् । माइकले सभामुखको टाउको फुटाउन खोज्नेले संसदीय मर्यादाको कुरा गर्न सुहाउँछ भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘सुरुवात कसले गरेको हो, हामीले हो ? उनीहरूले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गरे । हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्यौ।’
‘सभामुखले संविधानविपरीत सदन चलाएकाले मैले हिर्काउनकै लागि माइक तानेकी हुँ,’ उनले भनिन् । सांसद झाले सभामुख र अर्थमन्त्रीमाथि प्रहार गर्ने योजना सफल नभएकाले अर्को पटक प्रयास गर्ने बताइन् । आज प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमालेले संसद बैठक अवरुद्ध पार्न खोजेको थियो । एमालेले अवरुद्ध पार्न खोजेपछि सभामुखले १५ मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेर सुचारु गरेका थिए ।
सङ्खुवासभा सामुहिक ह’त्याका’ण्ड- हेपाइ सहन नसकेर ६ जनाको ह’त्या
संखुवासभा सामूहिक ह’त्या काण्डमा ज्यान गुमाएका ५२ वर्षीय तेजबहादुर कार्की गत सोमबार धान गोड्ने तयारीमा थिए । त्यसका लागि खेताला लिन उनी बिहान पाँच बजेतिर घर मास्तिरको बाटो हुँदै उकालो लागेका थिए । तर जुन घरबाट खेताला बोलाउन जान लागेका थिए, त्यही घरका २६ वर्षीय लोकबहादुर कार्कीले बाटोमै उनको ह’त्या गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
भदौ २१ मा विहान मादी नगरपालिका–१ घर भएकी आमा पार्वती कार्की, छोरा तेजबहादुर कार्की, बुहारी कमला, नातिनी बुहारी ३२ वर्षीया रञ्जना कार्की, पनाति ८ वर्षका विपिन कार्की र ५ वर्षीया गोमा कार्कीको ह’त्या भएको थियो ।
शव फरक–फरक चार स्थानमा फेला परेको थियो । संघीय प्रहरी इकाई कार्यालय धरानका एसपी भीम दाहाल, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट खटिएका डिएसपी रुगम कुँवर र संखुवासभाका डिएसपी लालध्वज सुवेदी सहितका अनुसन्धान अधिकृतहरूले ह’त्या अनुसन्धान गरेका थिए ।
ह’त्या गरिएका तेजबहादुरले ‘हेपेका कारण’ आफुले आवेगमा हत्या गरेको आरोपी लोकबहादुरले प्रहरीलाई बताएका छन् । तेजबहादुरका दुई छोरा विदेशमा छन् । लोकबहादुरलाई आफु विदेश जान नसकेकोमा ‘हिनतावोध’ थियो ।
स्थानीयहरुका अनुसार तेजबहादुरमा अरुलाई हेप्ने ‘प्रवृत्ति’ थियो । तेजबहादुरको प्रवृत्ति लोकबहादुरलाई मन परेको थिएन । ‘हेपाइ खप्न नसकेर लोकबहादुरले तेजबहादुर परिवारको विनाश गरेको अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरु बताउँछन् ।
तेजबहादुर र लोकबहादुरको घर करिब १०० मिटरको फरकमा छ । सोमबार विहान खेताला खोज्न निस्किएका तेजबहादुरलाई बाटोमा कुरेर बसेका लोकबहादुरले अचानक आक्रमण गरेर ह’त्या गरेका थिए । तेजबहादुरलाई ह’त्या गरेको पत्नी कमला र बुहारी रञ्जनाले घरबाट देखेपछि दौडिँदै गएका थिए । घरनजिकै रहेको खोला छेउमा दुवैलाई उनले ह्यामरले हिर्काएर ह’त्या गरे ।
आमा र हजुरआमालाई ह’त्या गरेको ८ वर्षका विपिन कार्की र पाँच वर्षीया गोमा कार्कीले देखेपछि प्रमाण मेटाउन लोकबहादुरले उनीहरुलाई लखेटेर बारीमा ह’त्या गरेका थिए । त्यसपछि घरमा पसेर लोकबहादुरले कुँडो पकाइरहेकी ८४ वर्षीया पार्वतीको ह’त्या गरेको अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकृतले बताए । मृतक सवैको टाउकोमा चोट लागेको छ ।
के हो ह त्याको कारण ?
तेजबहादुरलाई ह’त्या गर्नुपछाडि पनि बलियो कारण प्रहरीले खुलाउन सकेको छैन । तर लोकबहादुरको घरमा रगत लतपतिएको कपडा र ह’त्यामा प्रयोग भएको हतियार बरामद भएको प्रहरी बताउँछ ।
पक्राउ परेपछि लोकबहादुरले दिएको बयानअनुसार मृतक तेजबहादुर उनलाई हेप्ने गर्थे, नमिठो बोल्थे । एक वर्षअघि उनकै घरमा लोकबहादुरकी आमा लडेकी थिइन् । गम्भीर घाइते भएकी आमालाई उपचारका लागि झापाको एक अस्पताल लगिएको थियो । उपचारका क्रममा मृत्यु भयो ।
‘आमाको मृत्यु पछाडि तेजबहादुरकै षडयन्त्र भएको लोकबहादुरको बुझाइ रहेछ’ एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यही रिसले ह’त्या गरेछन् ।’ उनी मानिसक रोगीसमेत भएको प्रहरी बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘एक वर्ष अघिदेखि औषधि खाइरहेको भेटिएको छ ।’